Daani’eel Gammadaa dargaggeessa hojii aartii Oromoo hojjetudha. – Kichuu
[ August 2, 2021 ] Tarkaanfii WBO tii fi Mana ilmaan Oromoo N. Amaaraatti Mootummaan gubee	Videos
HomeAfaan OromooDaani’eel Gammadaa dargaggeessa hojii aartii Oromoo hojjetudha.
Daani’eel Gammadaa dargaggeessa hojii aartii Oromoo hojjetudha.
Daani’eel Gammadaa dargaggeessa hojii aartii Oromoo hojjetudha.Tarkaanfii Abbaa torbee
Amma sa’aatii 1:30 Irratti Wallagga bahaa magaalaa giddaa Ayyaanaa Keessatti abbaan torbee Gamoo adaanee Raggaasaa bakka basaastoonni ppf hooggantoonni pp itti shira Uummata oromoo Irratti xaxaan ammas utuu hooggantoonni pp fi harcaatuun humna waraana faashistii mootummaa koloneeffata Impaayera xoophiyaa dheengadda lola irraa hafte bakkasheen marii irra jirtutti shuggeen biyyootti dabalee jira.
𝗝𝗶𝗺𝗺𝗮𝗮 𝗟𝗶𝗺𝗺𝘂𝘂 𝙨𝙖𝙦𝙦𝙖𝙖 𝙛𝙞 𝗟𝗶𝗺𝗺𝘂𝘂 𝙆𝙤𝙨𝙨𝙖𝙖
𝗞𝗔𝗿𝗼𝗼𝗿𝗮 𝗔𝗯𝗱𝗶𝗶 𝗞𝘂𝘁𝗮𝗻𝗻𝗮𝗮 𝗣𝗣
Odeeffannoo Qabatama Godina jimmaa Aanaa Limmuu saqqa fi Limmuu 𝙺ossatti PPn Abdi kutachuunshi nama hin shakkisiisu. Aanooti lamman kanatti Torban darbee kaasani Ummata dirqisiisuudhan WBO sakittana jechuun Ummata Rakkisa jiraachun ishee niyaadatama. haaluma kanan torban dhuftu kaasee maqaa ABO Shane Barbdana yoo dadhabnne immo Bosona 𝗚𝗮𝗮𝗯𝗮𝗻𝗮𝗮𝘁𝘁𝗶 Abidda keenya, Sanan booda Abon shanee iddo teessu hin qabdu jechuudhan Warri limmuu saqqa dhaadacha jiru. Akka keessa beektonnif Marii pp kanarratti Yaada Hoggantoota pp kana akka nuun ga’eetti, sababa maqaa sakatta’insa Wbo jedhuun ummatni harkatti diduutin Gara bosona Jaarraa hedduuf Ummata Aanooti kana tajaajila tureef jiru barbadeessuf Qoophiirra jiraachun dhagahama jira.
Kun Sadarka Abdii kutannaa akka nama hin mamsiisuu.
Itichaa Lammii Burqaa
WBO zoonii lixaarraa
Waraanni bilisummaa Oromoo WBO’N Godina Qellem Wallagga Aanaa Anfiloo magaalaa garjeedaatii Waraana weerartuu pp irratti tarkaanfii haleellaa fudhateen guutummaa guutuutti barbadeessuun garii ishee booji’uun injifannoo boonsaa galmeessee jira.
Daani’eel Gammadaa dargaggeessa hojii aartii Oromoo hojjetudha. FIB irraa sagantaa “Kara Deema” jedhu qaba. Bakka hojiistii utuu galuu humna tikaan qabamee reebichi ulfaataan irra ga’e. Miidhaa cimaa irraan ga’anii gatani.
Daaniin diraamaafi fiilmii adda addaa hojjechuun nama tattaafatudha.
Biqilaa Amanuu Abbaashomaa
Breaking: Waraanni Sudaan karaa Lixa Gondariin bifa haaraan daangaa xoophiyaa cabsee galuudhaan weerara bal’aa geggeessaa jira.
Federaalizimii Sabdaneessa fi Bilxiginnaa: Xiinxala
Tarkaanfii WBO tii fi Mana ilmaan Oromoo N. Amaaraatti Mootummaan gubee